शीर्ष नेताको ‘होम क्वारेन्टाइन’ : देउवा टेलिफोन, बाबुराम ट्वीटर र प्रचण्ड साइक्लिङ गरेर दिन कटाउँदै
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिमका कारण नेपालमा पनि राजनीतिक गतिविधि शून्य भएका छन् । दलले आ–आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । शीर्ष नेता नै घरमा थन्किनु परेपछि राजनीतिक गतिविधि शून्य हुने भइहाले ।
तर, सँधै व्यस्त रहने दलका शीर्ष नेता घरैमा बस्दा दिन कसरी कटाइरहेका होलान् ? यो आम चाँसोको विषय छ, यति बेला । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकाले निवासबाहिर निस्कने कुरै भएन । नेकपासहित अन्य दलका शीर्ष नेताहरु पनि निवासबाहिर निस्कन छोडेका छन् भने अत्यावश्यक बाहेकका भेटघाट बन्द गरेका छन् ।
के गरी दिन कटाइरहेका छन् त शीर्ष नेता ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर सरकारी निवास बालुवाटार फर्किएपछि आराम गरिरहेका छन् । उनले अरुबेला जस्तो सामान्य र राजनीतिक भेटघाट बन्द गरेका छन् । तर, अत्यावश्यकीय भने भेट गरिरहेको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पोष्ट दैनिकलाई बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू बाहिर भनिएजस्तो कुनै पनि प्रकारको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्न । घोषणा गर्नेले घरि सेल्फ क्वारेन्टाइन्, घरि होम क्वारेन्टाइन भनिरहेका छन् । घोषणा गर्नेसँग कसले सक्छ र ?’ थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यकीय भेटघाट गरिरहेका छन् भने सतर्कताका लागि आवश्यक निर्देशन दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कुनै विषय भयो भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेका छन् । पहिला जस्तो दौडधूप गर्ने अवस्थामा नभए पनि प्रधानमन्त्रीको बसाई सामान्य नै रहेको थापाले बताए । प्रधानमन्त्री ओली त्यसैपनि स्वास्थ्य लाभमा रहेका कारण कोरोनाप्रति असाध्यै सजग छन् र अरूलाई सचेत रहन सल्लाह दिइरहेका छन् । शनिवार मात्रै उनले कोरोनाको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरेका थिए ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केहीदिन यता घरबाट निस्किएका छैनन् । उनले भेटघाट बन्द गरेका छन् । प्रचण्ड ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा छन् । राजनीतिक भेटघाट निकै कम गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले जरुरी भेटघाट मात्रै गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डले घरमा बस्दा पनि मास्क लगाइरहेका छन् । अत्यावश्यकीय भेटघाट गर्न आउनेलाई कोरोनाबाट सचेत र सजग रहन सल्लाह दिएर पठाउँछन् । खाली समयमा पत्रपत्रिका, किताब पढ्ने गर्छन् । रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउन नियमित व्यायम आवश्यक पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्ड समय मिलाएर घर वरिपरि साइकल हाँक्छन् । प्रचण्डले घर परिसरमा साइकल हाँक्दै गरेको फोटो र भिडियो नै उनका कान्छा ज्वाइँ जीवन आचार्यले फेसबुकमा हालेका छन् ।
Posted by जीवन आचार्य on Sunday, 22 March 2020
आचार्य प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहालका पति हुन् । गंगा अहिले प्रचण्डको निजी सचिव समेत हुन् । प्रचण्ड खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा साइक्लिङ गरिरहेका छन् । उनलाई आचार्यकी छोरी इशान्वीले साथ दिइरहेकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दिन पनि निवासमै वित्न थालेको छ, हिजोआज । उनले राजनीतिक भेटघाट तथा कार्यक्रम स्थगित गरेको स्वकीय सचिव भानु देवाले जानकारी दिए । तीन–चार दिनयता उनी कतै निस्किएका छैनन् । कुनै जरुरी भेटघाट गर्नु परे मात्रै देउवाले अनुमति दिएका छन् । कार्यकालको उत्तरार्धमा सक्रिय देखिएका देउवा कोरोना संक्रमणको जोखिमले सेलाएका छन् । दिन कसरी काट्छन् त सभापतिले रु स्वकीय भानु भन्छन्, ‘किताब अध्यययन गर्नु हुन्छ । र, भेटघाट भन्दा टेलिफोन उपयुक्त भनेर बढी जसो टेलिफोन मै कुरा गर्नु हुन्छ ।’ पार्टीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भनेको छ । र, त्यसको जिम्मा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई दिइएको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गंगलाल हृदयरोग केन्द्र पुगेर घर फर्किएका समाजवादी पार्टी संघीय परिषद संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई कोरोनाको संक्रमण जोखिमप्रति निकै सर्तक छन् । उनी स्यानिटाइजर गोजीमै बोकेर बस्छन् । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । समाजवादी पार्टीका प्रचार विभागका उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेका अनुसार डा। भट्टाई पनि निवासबाट बाहिर निस्कन छोडेका छन् । उनी पनि यो बेला अध्ययनमा आफ्नो समय बिताइरहेका छन् । बिहान सबै पत्रपत्रिका पढ्छन् । अत्यावश्यक भेट गर्छन् । त्यो पनि सावधानी अपनाएर । मास्क लगाएर र दूरी टाढा गरेर । र, डा। भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा भने बढी सक्रिय छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफुले पढिरहेको पुस्तकबारे पनि जानकारी दिएका छन् । त्यो हो–बालकृष्ण पोखरेलले लेखेको ‘खस जातिको इतिहास’ । र, उनी दैनिकजसो केही न केही विषयमा ट्वीट गरिरहेका छन् । उता, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिं भण्डारीले पनि सामान्य भेटघाट बन्द गरेका छन् ।
<<< : सीमा नाकाबाट भित्रिएका नेपालीलाई ‘क्‍वारेन्टाइन’मा राख्‍न गृहको परिपत्र
सीडीओ र सांसदले गलत अफवाह फैलाएका रुंगटामा भेटिएन कोरोना : >>>
सोलुखुम्बुमा हाइड्रोपावरको काम ठप्प
बल्ल पो !, विदेशबाट आउनेको अभिलेख राख्न निर्देशन
मलेरियाको औषधि कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी
‘मलाई दुत्कारेर कोरोना आउँदैन भने गाली त के म कुटाई खान तयार छुँ’
२ रुपियाँ किलाे पनि विकेन किसानको मूला, ट्याक्टरले जोतेर नष्ट गर्दै